တရုတ် 70mm ဖြတ်တောက်ထားသည့် Flat Fascia ပလပ်စတစ်အဖုံး Aluminum SMD Downlight ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ Simons
70mm ဖြတ်တောက်ထားသည့် Flat Fascia Plastic Cover လူမီနီယမ် SMD Downlight
လက်မှတ်: SAA, C-Tick, CE, RoHS, LCP, ISTMT, LM79, TM21, LM80
Plastic Cover လူမီနီယမ် 70mm Cut-out SMD Downlight
၁။ အဆင့်မြင့်အပူစီးကူးပလတ်စတစ်ရေဒီယိုလှိုင်းများ၊ ကောင်းမွန်သောအပူလွန်ကဲမှုစွမ်းဆောင်ရည်၊ ကြာရှည်သောသက်တမ်း။
2. Dimmable နှင့် Non-dimmable မှ Optional ။
၄။ aluminium downlight နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုသက်သာသည်။
၅။ SAA၊ C-tick, CE, RoHs အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရပြီးဖြစ်သည်။
၆။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် IC-4 ကိုလုံခြုံစွာဖုံးအုပ်။ အဆောက်အ ဦး ဆောက်လုပ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။
7. မြင့်မားသော lumen output ကို, lumen ထိရောက်မှု 100lm / w အထိနိုင်ပါတယ်
၈။ CCT တစ်ခုတည်းနှင့် Tri-color ဖြစ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်
၁၀။ မြင့်မားသော light transmittance PC diffuser ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ မြင့်မားသော lumen output ကိုအသုံးပြုခြင်း။ ၎င်းတွင်ဖြန့်ကျက်သူသုံးခုရှိပြီး၎င်းကိုဖြုတ်ချမည်မဟုတ်ဟုကတိပေးသည်။
၁၁။ PCB ဘုတ်ပေါ်မှချစ်ပ်များ၊ မျှတစွာဖြန့်ဝေမှု၊ နိမ့်ဆုံးမှမှိန်သော်လည်းအဘယ်သူမျှမမှောင်မိုက်အာကာသ။
၁၂။ သုံးပွင့်ဆိုင်အလင်းရောင်အလိုအလျှောက်မီးခလုတ်သည်အလင်း၏ဘေးတွင်ရှိနေပြီးအသုံးပြုသူသည် 3000K / 4000K / 5000K သို့ပြောင်း။ ကုန်ပစ္စည်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ switcher ရဲ့အရောင်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
ပါဝါ 5W, 8W ရပ်သွားသည် 70mm
အချင်း 92mm အမြင့် 55mm
ရှေ့သို့ 90mm Cut-Out နက်ရှိုင်းသောအတွင်းဘက်သုံးအရောင်ရှိသော SMD Downlight
နောက်တစ်ခု: 90mm Cut-out ပလတ်စတစ်အဖုံး Aluminum Flat Fascia SMD Downlight